Portrush floor floor apt - 10 min ukuhamba igalufa/elwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJoanne
Umgangatho wethu osezantsi kwigumbi lokulala kumganyana nje omfutshane ukusuka kumbindi wedolophu yolwandle yasePortrush. Sihamba imizuzu emi-5 ukuya eRoyal Portrush. Sinezethu indawo yokupaka ezitalatweni kunye nebala elincinci lelanga kwigadi engasemva. IPortrush yindawo entle yokuhlola unxweme olusenyakatho kunye neendawo ezingqongileyo. Idolophu ngokwayo ineelwandle ezi-2 eziphumelele ibhaso, igalufa enkulu kunye neebhari ezininzi ezintle kunye neeresityu. Uya kufumana umtsalane omkhulu wolwandle kubandakanya ukuzonwabisa kukaBarry!
Igumbi lethu elikumgangatho ophantsi ligumbi elinye lokulala, elinekhitshi langoku, igumbi lokuhlambela kunye nendawo engaphandle evaliweyo. Kukho inyathelo elinye kuwo omabini amacango angaphambili nangasemva ukufikelela kwipropathi. Kukho i-sofa yekona kwigumbi lokuhlala eguqulela kwibhedi epholileyo ephindwe kabini. Sine-WiFi, i-intanethi ye-tv, iwasha, umpheki, i-microwave, ifriji, njalo njalo. Sikwanayo nenye echongiweyo indawo yokupaka esitratweni, kwaye idla ngokuba negumbi lesithuthi sesibini. Siyathandana nesilwanyana xa usicela. Sikwavunyiwe nebhodi yabakhenkethi.
4.98 ·Izimvo eziyi-174
Sikwindawo yokuhlala ezolileyo, kumgama ohamba lula wedolophu, iilwandle kunye nebala legalufa
Siya kuhlala sisekupheleni komnxeba okanye umyalezo ukulungisa nayiphi na imiba okanye unikeze iingcebiso kunye neengcebiso. Ukuba kukho nantoni na enobuzaza ngakumbi omnye wethu uya kuhlala ekhona ukuza kwipropathi.